ကျနော့ဆရာမလေး – Grab Love Story
အပ်ချုပ်စက်ခုံကို ကွယ်ပီး ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေးလေးကို အတင်းဆွဲထုတ်ပီး ထူမလိုက်တယ်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ ဘလောက်အင်းကျီ နှိပ်စိလေးတွေကို တဖျောက်ဖျောက်မြည်အောင် ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဟင်းလင်းပွင့် ထွက်သွားတာနဲ့ အနက်ရောင်ဘရာစီယာလေး မနိုင်ဝန်ထမ်းထားရတဲ့ ၀ါဝင်းစိုပြေတဲ့ နို့ကြီး၂မွှာက ၀င်းကနဲ ပေါ်လာတယ်။ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ဘလောက်လက်ပြတ်ကလေးကို ချွတ်ချရင်း ဘရာ ချိတ်ကလေးတွေကိုပါ သူမဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုပီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်မိတယ်။ ခုဆိုရင် ကျနော့်ဆရာမလေးခမျာ အပေါ်ပိုင်းဗလာ ဖြစ်သွားရှာပီ။ မတ်တပ်ရပ်လျှက် မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်လို့ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာတယ်။
နားရွက်ကလေးတွေက နီရဲနေတာ မျက်နာတစ်ခုလုံး ပန်းသွေးရောင်ထနေရှာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော့် အိမ်နီးချင်း သူနာပြု ဆရာမလေး ဒေါ်ခင်ချိုမေ ခမျာ ယောကျာ်းဆိုလို့ ကျနော်နဲ့ပဲ ဆုံဖူးကြောင်း သိသာနေတယ်။ လိုးဖို. အကြောင်းဖန်လာတော့လည်း ကျနော်ဖြည့်စည်းပေးရမှာပေါ့။ သားဖွား ဆေးအကြောင်းတေ နားလည်နေတော့ သိပ်မချူပ် လိုက်ပါဘူး မွေးလူနာရှိတိုင်း နိုက်မွေး နေရတော့ သူအတွက် အတွေ့အကြုံတေက ရိုးနေပါပြီလေ ။ တစ်ချိူ့ဆေးကြောင်းတေတောင် ကျနော့် သူကပြန်သင်ပေးနေတာ ဗိုက်ကြီးမှာမပူရတော့ဘူးပေါ့။ ခါးမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စည်းနှောင်ထားတဲ့ ထမီလေးကိုပါ ဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့ အောက်ခံ မ၀တ်ထားတဲ့ ဆရာမလေး တစ်ကိုယ်လုံးဝစ်လစ် စလစ်ဖြစ်သွားရှာပီ။ မျက်လွှာကလေးချလို့ တောင့်တောင့်လေးရပ်နေတဲ့ ဆရာမလေးကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဗျာ။ အဆီပိုမရှိတဲ့ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်ကလေး၊ ချက်နက်နက်ကလေး၊ ၀ါဝင်းနေတဲ့ အသားရည်၊ သာမန်ထက်ထွားတဲ့ ချိုဗူးကြီးနှစ်လုံးက တင်းရင်း လုံးကျစ်လို့ တွဲမနေဘူး။ အောက်ဖက်ကို ကြည့်ပါဦး၊ အမွှေးနုနုလေးတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကလေး။ ဆင်စွယ်လို ချောမွှတ်နေတဲ့ လက်မောင်းအိုးကလေး ၂ခုကို ကိုင်လိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို တစ်ပတ် လှည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျောပေးထားတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားလေးကလည်း တပ်မက်စရာပါလေ။ ကျောပြင် ကော့တော့တော့လေးက အပြစ်အနာဆာ ကင်းပီးပြေဆင်းအလာ အောက်ရောက်တော့ ကော့တက်သွားတဲ့ အိုးဝိုင်းကားကားလေးက အောက်ကို ပြန်ကောက်ပီး ပေါင်တံ လှလှလေးမှာ အဆုံးသတ်လို့ပေါ့။ အပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံး အလှပိုင်ရှင်ကလေးကို ကြည့်ပီး ကျနော့်လိင်စိတ်တွေ အရမ်းဆူပွက်နေမိပီ။ နက်မှောင်သန်စွမ်းလွန်းတဲ့ ကျစ်ဆံမြီး တုတ်တုတ်ကြီးကလည်း တင်ပါး အကျော်နားအထိ တွဲလျောင်းကျနေတော့ ဒီကျစ်ဆံမြီးကြီးကို အားရပါးရ လက်နဲ့ဆွဲပီး လေးဖက်ထောက် လိုးလိုက်ချင်စိတ်က တားမရတော့ဘူး။ ဘာမှစကားမဆိုမိပဲ တုန်ရီနေတဲ့ ကျနော် ပုဆိုးနဲ့ အတွင်းခံကို မြန်မြန်ချွတ်ချလိုက်ပီး မာတင်းနေတဲ့ လိင်တံကြီးကို တင်ပါး၂ခုကြားထဲထောက်ထားရင်း ဂုတ်သားဝင်းဝင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ရွရွလေးနမ်း၊ လက်၂ဖက်ကလဲဂျိုင်း အောက်က လျှိုပီး နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တော့– “အို! ” ဆိုတဲ့ ညည်းသံကလေးနဲ့ တင်ပါးလေးကို အရှေ့ဖက်ကော့ပစ်တယ်။
“ဟင်းးး ဖိုးသ..သက် ချို အရမ်းမောလိုက်တာကွယ်” “ချစ်တယ်.. ဆရာမလေးရာ..” ‘ပလွတ်.. ပြွတ်စ်..ပြွတ်စ်’ ကျောပေးထားတဲ့ချစ်သူ ဆရာမလေးကို နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင် ညှစ်ချေရင်း သနပ်ခါးရနံ့လေးတွေ မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ပုခုံး၊ ဂုတ်ပိုး၊ ပါးပြင်၊ နားရွက်ဖျားကလေး အဲ့ဒီလိုနေရာအနံ့ လျှောက်နမ်းပေးနေမိတယ်။ အောက်က ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးတွေ စိုစပြုနေတဲ့ ကျနော့်လိင်တံမာမာကြီးနဲ့လည်း သူ့တင်ပါး ပြောင်ချောချောအိအိလေးကို ဟိုထောက်ဒီထောက် လိုက်ထောက်ရင်း ညှောင့်ပေးနေမိတယ်။ နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင်ထားရင်းလည်း နို့သီးခေါင်း စူစူလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မ ကြားညှပ်ကိုင်ပီး လှိမ့်ပေးနေလိုက်မိတယ်။ “ချို … ချို ဒူးတွေတအားပျော့လာပီကွာ မတ်တပ်ဆက်မရပ်နိုင်တော့ဘူး.. အမေ့!” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခွေကျချင်သလိုဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ်လုံး ပုံ့ပုံ့လေးကို ဖမ်းထိန်းထားရင်း ခြေလွှတ်လက်လွှတ် ယက်ကန်ကန်လေး ဖြစ်သွားအောင် ဆွဲပွေ့ချီလိုက်မိတယ်။ ခြေလှမ်းခပ်ကျဲကျဲလှမ်းလို့ ကုတင်ပေါ် အသာအယာချထားပေးလိုက်ပီး ပက်လက်လှန် ဒူးထောင်ပေါင်ကားဖြစ်အောင် အနေအထား ပြင်ထားပေးလိုက်တယ်။
ကျနော်အောက်ကနေ ကုတင်ပေါ်လှမ်းမတက်ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ပေါင်ကားထားတဲ့ ဆရာမလေးကို ကုတင်စောင်းနားအထိ ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်ကလေးက ဖားဖိုလို မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်ဖြစ်ပီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဆရာမလေးက ခေါင်းထောင်ကြည့်လာတယ်။ ကျနော်က ဂရုမစိုက်သလိုလုပ်ရင်း ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကို ဆွဲယူပီး ဆရာမ တင်ပါးတွေအောက်ကို ထိုးထည့်ဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ ရသွားပီ။ တင်ပါးအောက် ခေါင်းအုံးခံလိုက်တော့ ခပ်မြင့်မြင့်လေးဖြစ်လာတဲ့အပြင် နီရဲနေတဲ့ အကွဲကြောင်းလေးက ပိုလို့တောင် ပြဲအာအာလေး ဖြစ်လာသလိုပဲ။ အဖုတ်မွှေးလေးတွေပေါ်မှာ အကွဲကြောင်းထဲက တောက်တောက်ယိုကျလာတဲ့ အရည်လေးတွေက သီးလို့တောင်နေ ပါပီကောလေ။ “ဆရာမလေး” “ရှင်! (ခေါင်းကလေးထောင်ထလာပီး ရီဝေေ၀ ရှက်ဝဲ၀ဲလေးနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားထဲ မျက်နာအပ်မလို လုပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို ငေးကြည့်နေတယ်) “ကျနော့်ကို အထင်သေးမှာလားဗျာ” “ဟေ့အေး .. သေးဘူး ပို… ပိုပီးတောင် ချစ်မိလာတာ … ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးပါ.. အာ့ အာ့ ရှီးးးး” ခေါင်းနဲ့ မွှေ့ယာ ရိုက်ခတ်သံ ဘုတ်ကနဲ မြည်သွားတဲ့အထိ ဆရာမလေးနောက်ပြန် လှဲအိပ်သွားရှာတယ်။
ပါးစပ်ကလည်း အကျယ်ကြီးပဲ အော်ညည်းလို့ပေါ့။ ဆရာမလေး ပြန်ဖြေတာမှ မဆုံးလိုက်ဘူး ဖောင်းကြွနေတဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲ အဖုတ်ဖောင်းလေးကို ကျနော် ရှလွှတ်ကနဲကောက်လျှက်ပစ်လိုက်တာကိုးဗျ။ ချိုမြတဲ့ အဖုတ်ရည်အရသာနဲ့အတူ (နည်းနည်းတော့ ငံတယ်ဗျ) အနံ့ယဉ်ယဉ်လေးပါ ရှူမိတာမို့ လိင်စိတ်တောင် ပိုကြွလာသလိုပဲ။ အဖုတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း လျှာကို တောင့်တောင့်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပီး အစုန်အဆန် ထိုးခွဲပေးနေမိတယ်။ နည်းနည်းလေး လျှာညောင်းသလိုဖြစ်လာရင် အစိအပေါ်ကို လျှာနဲ့ တရုတ်စာရေးသလို ပျော့ပျော့ကလေး စုတ်တံနဲ့ ခြစ်သလို ဘယ်ညာကစား။ ပင်ပန်းသလိုဖြစ်လာရင် အစိကို သကြားလုံးစုတ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်။ အပေါက်ဝကို နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ထားပီး လျှာကို ၀င်နိုင်သလောက်သွင်းပီးမွှေ့ပေးနဲ့ ဆက်တိုက် တိုက်စစ်ဆင်ပေးလိုက်တာ ကျနော့်ဆံပင်တွေကို လက်၂ဖက်နဲ့ အတင်းဆွဲပီး တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် အကြောတွေဆွဲရင်း တစ်ချီပီးသွားရှာတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ကျနော်လည်း အသက်၀၀ ရှူနိုင်တော့လို့ ဆီးခုံလေးပေါ် မျက်နာအပ်ပီး ၂မိနစ်လောက် အသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်း အမောဖြေနေမိတယ်။
အမောပြေသွားတာနဲ့ မတ်တပ်ချက်ချင်းရပ် နီရဲနေတဲ့ ကျနော့် ထိပ်ဖူးနဲ့ အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေတဲ့ အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို သေချာချိန်ပီး တေ့ထားလိုက်တယ်။ အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် ဆရာမလေး မျက်လုံးမှိတ်ပီး မှိန်းနေရာက ဖျတ်ကနဲ မျက်လုံးပွင့်လာပီး ခေါင်းထောင်ထလာတယ်။ ချွေးစက်ကလေးတွေ စိုရွှဲနေတဲ့ ကြားက မျက်နာဖူးဖူးလေးက ဆံနွယ်ခွေခွေလေးတွေ ၀ဲကျနေတာ ချစ်စရာလေးဗျာ။ အင်မတန်ကောင်း တဲ့ အဖုတ်အလျှက်ခံပီးတဲ့နောက် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ကာမ အရသာကို ခံစားရတော့မှာမို့ တက်ကြွလာတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေဆိုတာ သူ့အကြည့်က ဖော်ပြနေတယ်။ “အို!..” “အားးး ကောင်းလိုက်တာ.. စီးပိုင်နေတာပဲ ဆရာမရာ နာလားဟင်? “သာသာလေး ဖိနော် … မနာဘူး … နည်းနည်းတော့ ရင်ခေါင်းထဲမှာ တစ်ဆို့ဆို့ကြီး … ဒါပေမယ့် ချို ခံနိုင်ပါတယ် … အားးးး ရှိ.. ရှီးးး” ကျနော် တအားမလုပ်ပါဘူး .. ဖွဖွလေးပဲ ဆောင့်မယ်နော် ဆရာမ” လိင်တံက လည်းသံပိုက်လုံးတစ်ချောင်းလို မာကျောလွန်းနေတော့ နူးညံ့လွန်းတဲ့ အဖုတ်နံရံတွေကို ထိုးထိုးခွဲပီး ၀င်သွားသလို ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်းလဲ ထိပ်ဖူး ဒစ်နဲ့ ဆွဲချိတ်ထုတ်လိုက်သလို အဖုတ်တစ်ပြင်လုံး စူခုံးကြွပီး ပါပါလာတာဗျ။
ခုထိ တစ်ဝက်လောက်ရောက်အောင် မနည်းထိုးထည့်နေရသေးတယ်။ အတွင်းနားရောက်ဖို့ နည်းနည်းလိုနေသေးတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နို့၂လုံးကို လှမ်းဆုပ်ပီး ဖြေးဖြေးချင်းပဲ ဆွဲလိုးနေလိုက်တာ စိတ်ထဲမှာ ဟာကနဲဖြစ်သွားလို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ လိင်တံက အဆုံးထိဝင်သွားပီ။ ခုဆို ဆီးခုံ၂ခုက ဂဟေ ဆက်မိနေပီလေ။ နောက်ထပ် ၁၀ချက်လောက် အစအဆုံး အသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်အဆင်ချောသွားပီမို့ အားထည့်ပီး ခပ်ဆဆလေး ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ်။ “အင့် အင့် အင့် ဟူးးးး ကျွတ်ကျွတ်! ဖိုးသက်လေး .. “ချို” ပြန်.. ပြန်ဖြစ်လာပြန်ပီ.. မောလိုက်တာ… မရပ်နဲ့နော်.. ဆက်တိုက်လေးဆောင့်ပေး … အားး ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးကွာ ..မရတော့ဘူး သိလား … အိုးးးးး” ဆရာမလေး ပီးပြန်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပီမို့ ဒီအချိန်မှာ အဖုတ်ကွဲအောင် ဆောင့်လည်း မနာတော့ဘူးလို့ မီးစိမ်းပြလာတာမှန်း ရိပ်မိပီး နို့ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို ခါးကျင်ကျင်လေးဆီ ပြောင်းကိုင်ရင်း အသားကုန်ဆောင့်လိုးနေမိတယ်။ ကျနော့် လိင်တံကို အသားကုန် အဖုတ်ကြွက်သားတွေက ဆွဲညှစ်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတော့ သူအရမ်းကောင်းပီး ကာမအရသာ ရသွားပီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်မရပ်သေးပဲ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတုံးပဲ။ “ဆရာမ.. ဆရာမ ကျနော်လည်း မရတော့ဘူးဗျာ ထွက်တော့မယ် … ဟားးးး” ” “ချို” သေတော့မယ်ကွာာာာ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်း မသိဘူးးးး နောက်တခါ မောလာပြန်ပီ… မရတော့ပြန်ဘူး… မရတော့ဘူး မရပ်နဲ့နော်…. မရပ်ပေးနဲ့ အားးးးးးး” “ဖတ်.. ဖတ်… ဖြောင်း..ဖြောင်းးး … အီးးး” ပုံမှန်အားဖြင့် ကာမပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ မလွယ်တဲ့ မိန်းမတွေထဲမပါတဲ့ ကျနော့်ဆရာမလေးဟာ ပီးသွားတာကို ဆက်တိုက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထပ်ထပ်ပီးတတ်မှန်း ကျနော်ရိပ်မိပီး မီးပွင့်မတတ်ဆောင့်လိုးရင်း ကျနော့်လိင်တံကို အဖုတ်က တဇိဇိနဲ့ ဆွဲအညှစ်မှာ ဘယ်လိုမှ မထိန်းထားနိုင်တော့ပဲ အပြင်းထန်ဆုံး ဆောင့်လိုးရင်း သုတ်ရည်ပူနွေးနွေးတွေကို ပန်းထည့်ပစ်လိုက်မိပီ။ အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဆာလောင်နေသမျှ အားရပါးရ ပီးလိုက်ရလို့လားမသိဘူး သုတ်ရည်ပန်း အထုတ်မှာ ကျနော့်နားထဲက လေတွေက တရှူး၂နဲ့ ထွက်သွားသလိုပဲ။ နားထဲမှာ တ၀ီဝီတောင် မြည်လာတယ်။ နောက်ဆုံး လက်ကျန်သုတ်ရည် တစ်စက်နှစ်စက်လောက်ကို ညှစ်ထုတ်ရင်း အဖုတ်နဲ့ လိင်တံတပ်ထားလျှက်နဲ့ ဆရာမလေး ကိုယ်ပေါ်ကို ကျနော်မှောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ ပြီးပါပြီ….။